Wamkelekile kwindawo yokusebenzela enomdla kunye nobuchule, apho ingabantu abenza umohluko.
At DataNumen, Siyazi ukuba impumelelo yethu sisiphumo sabasebenzi bethu abangaqhelekanga-iqela leetalente, iingcali ezinomdla kakhulu, zisebenza kunye ukuhambisa izisombululo zokubuyisa idatha ezinceda abantu xa kwenzeka inhlekelele yedatha. Sinomdla kwinto esiyenzayo kwaye siyenzela bani, kwaye olo thando luza nenjongo.
Njengeqela, siyaqhubeka sifuna iindlela ezintsha nezintsha zokuhlangabezana neemfuno zabathengi bethu kunye nokuqhuba ishishini lethu.
Umsebenzi wethu ulula: yenza iimveliso ezintle ezinceda abantu ukuba babuyise idatha yabo kangangoko kunokwenzeka. Indawo yethu yokusebenza ngokubambisana isigcina sigxile kwaye sizimisele ekufezekiseni le njongo. DataNumenInkcubeko yamkela ukwahluka kweengcinga, indlela yokuphila, ukuqonda ngobuchule kunye neembono zabantu. Siyazingca ngento esiyenzayo kwaye sihlala sijonge abantu abanomdla wokunceda ukugcina ishishini lethu liphumelela.
Unomdla wokujoyina iqela lethu? Jonga imisebenzi yethu engezantsi kwaye usebenzise namhlanje.
Layisha uluhlu oluninzi